Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. रुसको पहिलो मानवाकृत रोबोट अन्तरिक्ष केन्द्रमा – Emountain TV
रुसको पहिलो मानवाकृत रोबोट अन्तरिक्ष केन्द्रमा
एजेन्सी, १० भदौ । रुसले मंगलबार पहिलो मानवाकृत रोबोट सफलतापूर्वक अन्तराष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा पुर्‍याएको छ । गत साता रुसको यो अभियान असफल भएको थियो ।
फेदोर नाम दिइएको मान्छेकै शरीर जत्रो रोबोटले मानिस झै यताउता हिँड्ने र वरपरबाट सामान ल्याउने राख्ने काम गर्दछ । उक्त रोबोटले खासगरी अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहेका वैज्ञानिकलाई काममा सघाउनेछ । रुसी अन्तरिक्ष केन्द्र रोसकोसमोसले मानवविहीन सोयुज एमएस–१४ यानको सहयोगमा उक्त रोबोट अन्तरिक्षमा पु¥याएको जनाएको छ ।
उक्त यान गत बिहीबार दक्षिणी कजाकस्तानबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो । उक्त रोबोट आगामी सेप्टेम्बर ७ सम्म अन्तरिक्ष केन्द्रमा राखिनेछ । सोयुज यानबाट खासगरी मानिसलाई मात्र अन्तरिक्षमा पुर्याउने गरिन्छ, तर यस पटक रोबोट पठाइएको छ । यो यानमा ६सय ७० किलोग्राम सुख्खा सामान पठाइएको छ जसमा औषधि उपकरण, खाना, औषधि र व्यक्तिगत सरसफाइका सामान रहेका छन् ।
सन् २०११ मा नासाले जेनेरल मोटर्सको सहयोगमा बनाइएको रोबोनट २ नामको रोबोट पठाएको थियो । यो रोबोटलाई पनि उच्च जोखिमयुक्त ठाउँमा काम गर्न प्रयोग गरिएको थियो । तर प्राविधिक समस्या देखिएपछि यो रोबोटलाई सन् २०१८ मा पृथ्वीमै फर्काइएको थियो ।
सन् २०१३ मा जापानले पनि आफ्ना अन्तरिक्ष यात्रीसँगै किरोबो नामको सानो रोबोट पठाएको थियो ।
मङ्गलबार, १० भदौ २०७६
इजरायलमा पाँच महिनामा दोस्रोपटक आमनिर्वाचनका लागि मतदान
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औँ महासभा आजदेखि सुरु हुँदै
खाडी क्षेत्रतर्फ इन्धन तस्करी गरेकोे भन्दै इरानले लियो पानीजहाज नियन्त्रणमा
भारतको आन्ध्र प्रदेशमा डुंगा दुर्घटना हुँदा १२ को मृत्यु, २५ बेपत्ता
उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्न ट्रम्पलाई किमको निम्तो
साउदी अरेबियामा ड्रोन आक्रमण इरानले गरेको अमेरिकाको दाबी
साउदी अरेबियाले उत्पादन घटाएपछि विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य आकाशियो
इलामकै पुरानो सरकारी विद्यालयमा डिजिटल प्रबिधिवाट पढाई सुरु
साउदीमा तेल कम्पनीमा ड्रोन आक्रमण, तेल र ग्यास उत्पादनमा कटौती
ओसामा बिन लादनेका छोरा हम्जा मारिएको ट्रम्पद्वारा पुष्टि